Akhriso Qisadii Leyla oo xanuun badan,kuna geeriyootay maanta dalka Sacuudi Arabiya..Makkah | Salaan Media
Akhriso Qisadii Leyla oo xanuun badan,kuna geeriyootay maanta dalka Sacuudi Arabiya..Makkah
May 4, 2019 | Published by: Hamse
Leyla Bashiir waxay aheyd gabadh masaakiin ah oo kaliya-xanuun illaa 2015-tii la il-darneyd oo la daala dhaceysay, illaa markii dambe ay labaduba fariisteen oo gabi ahaanba shaqadoodii gabeen.
– Si ay u sii noolaato, waxay u baahneyd in asbuuc kasta dhowr jeer la dhaqo, waxay ku aheyd khasab iyo waajib, haddana ma aysan awoodin qarashaadkaas faraha badan. Maalinba walaal Soomaaliyeed ayaa ka dabbari jiray oo dhabarka u ridan jiray, haddana ma ahan wax dhammaanaya ee waxay aheyd shaqo joogta ah, dadkuna waa bini’aadam oo qofkii halmar wax saddaqeysta, dib dambe uma soo laabto, dan, duruuf, yareysasho, gacan-adeyg, iyo middii ay noqotaba.
– Afar iyo labaatan saac waxay feysbuugga soo gelin jirtay akhbaarteeda iyo halka ay wax u marayaan. Sidoo kale waxay mar walba har iyo habeen umadda Soomaaliyeed ka dalban jirtay taageero dhaqaale, iyada oo weliba xanuun la taaheysa oo aan xanuun dartiis si fiican u hadli karin, marna toos u ooyeysay.
– Mararka qaar, inta xanuunku ka tanbadiyo oo u adkeysan weyso ayay iyada oo ilmeyneysa feysbuug Live soo geli jirtay, si ay walaalaheeda Soomaaliyeed xanuunka ula qeybsadaan, marna loogu duceeyo, iyaduna bal uun inyar oo nafis iyo wehel ah u hesho.
– Saas oo ay tahay, iyada oo ah bukaan aad u il-daran, xanuunkeeduna uu yahay mid aad u daran oo ay daqiiqad kasta dhimasho qarka u saarneyd, haddana ma quusan jirin oo waxay aheyd qof mucjisa ah oo rajo badan, waxaana u sabab ahaa iimaabkeeda oo ahaa mid aad u sarreeya.
– Anigu shakhsiyan xaaladdeeda waxaan ula socday si dhow/hoose oo marna aad ayay ii murjin jirtay, marna waa iga farxin jirtay, gaar ahaan marka ay indhaheygu qabtaan, abaayo Leyla oo asxaabteeda la faraxsan, aadna u dhoollacaddeyneysa (feybuug iyo Isnaabjaat).
– Qalbigeyga iyo dareemaheygu waxay toos ula shaqeynayeen hadba xaaladda ay markaas ku sugan tahay. Waxaan is arki jiray aniga oo aad u murugeysan oo ay ilmadu iga soo daadaneyso, haddana isla daqiiqo yar keddib waxaan is arki jiray aniga oo kaligey iska dhoollacaddeynaya, maxaa yeelay, iyada ayaa aad u jecleyd oo dooratay in aysan murugo iyo welwel kaliya la noolaan oo ay hadba xaalad iyo jawwi cusub abuurato.
– Inkasta oo aan dhowr jeer la xariiray, weliba mararka qaar u sheekeyn jiray, haddana dhimashadeeda keddib, murugada, qoomamada iyo walbahaarka maanta iigu weyni waa, in aanan idinla wadaagin oo aan kaligey qarsaday, mana aanan ku filneyn, waxayse aheyd nacasnimo aan ka shallaayay. Hadda waxaan qalbiga ka dareemayaa, in aan ahay dambiile weyn oo hagraday walaashiis. I cafi abbaayo.
Aniga oo 70% hubo in warbixinteedu ay gaartay meel kasta oo ay ku nool yihiin Soomaali, haddana abaayadeen Leyla, hiilkii iyo garab-istaaggii ay naga mudneyd ma aysan helin. Qaddarka Alle ka sokow, waxay u dhimatay dayac iyo dandarro caafimaad.
Cadaab adduunyo waad soo aragtay ee Allaha raaxada jannada kugu illowsiiyo abaayo macaanto. Rabbigeenna waxaan ka rajeynayaa, in uu jannatul firdows kugu marti-soori doono, insha Allaah.
Dhimashadaadu waxay inoo aheyd cashir weyn oo lama illaawaan ah, waano dhammeystirab iyo ku-cibra-qaadasho qofkii dareen iyo caqli leh.
Innaa lillaah wa innaa ilheyhi raajicuun ilahay subxana watacalla ha u naxariisto walaasheyn maanta ayey dhimatay